Bug inogadzirisa muLinux Mint 12 | Kubva kuLinux
Vakomana Linux mint Ivo vari kushanda nesimba kuendesa yakagadzikana uye inoshandisika chigadzirwa kune avo vashandisi. Tinogona kutarisa izvi gare gare kuti uone kuwanda kwekugadziriswa izvo zvakawedzerwa kune ichave iri yekupedzisira vhezheni ye Linux Mint 12.
apt ikozvino inoshanda zvizere.
gadzirisa sarudzo yekuwedzera PPA repositories.
MATE akagamuchira yakakwidziridzwa yekumhanyisa-yemurume-chikamu-maneja (Kanganiso iyi inodzivirira MATE kubva kutanga kubva pachiratidziro chekupinda yevashandisi i386.)
mintMenu yakaendeswa ku MATE.
Mapakeji anovhurwa neGDebi.
MGSE M enu atogamuchira mapfupi ekhibhodi uye agamuchira akasiyana mabug fixes
MGSE-WindowList yakapihwa chifananidzo chitsva uye ikozvino inotaridzika chaizvo yakafanana neyewindow runyorwa gnome 2.
MGSE-Bottompanel, izvozvi zvave kugona kuchinjika pakati penzvimbo dzebasa uchishandisa mapfupi ekhibhodi Ctrl + Alt + Museve makiyi.
Mint-Z maficha iye zvino ane sirivheri mavara kumashure kwemapaneru, menyu, uye hwindo runyorwa rinotaridzika kufanana Linux Mint 11. Iye zvino pane musoro mutsva unonzi Mint-Z-Rima, Iyo ine zvinhu zvitema uye iri kusimudzira pane iyo yandatoona mu RC de MGSE.
Iko kugona kuvhura madhairekitori semudzi kwakawedzerwa kuGnome 3.
Uye zvakare, Clem anotiudza kuti:
Mhinduro yatakatambira kubva kuRC yakanga isina kutwasuka sezvazvinowanzoita. Zvisingashamisi, kuiswa kweGnome 3 kuri kupatsanura nharaunda yeLinux Mint. Isu tinofara kuona kuti MGSE yakagamuchirwa zvakanaka uye kuti yakabatsira vanhu kutamira kuGnome 3. MGSE yakagamuchira yakawanda yekuvandudzwa kunoshamisa kubvira ipapo uye yekupedzisira vhezheni yeLinux Mint 12 ichauya neGnome 3 iyo ichapa ruzivo rwakawanda zvirinani pane iyo RC vhezheni.
Ini pachangu ndinonzwisisa chokwadi chekuti vamwe vashandisi veGnome 2 vane hanya zvikuru. Kana iri Gnome 3 kana MATE, aya matekinoroji achangobva kuitika uye kwete seakakura seGnome 2. Zvakakosha kunzwisisa kuti vanomiririra ramangwana redu, uye kuti kujoinana neGnome 2 kwaizoita mamiriro ezvinhu maererano nemapakeji nemakakatanwa munguva yekumhanya nezvose Gnome 3 uye Ubuntu zvaive zvisingadzoreke zvachose. Mune mamwe mazwi, kana Gnome 2.32 yaichengetwa, Linux Mint yaizotadza kuenderana neUbuntu uye yaisazokwanisa kumhanya Gnome 3 paLinux Mint. Isu tanga tiri kumwe kugovera kwakatsigira Gnome 2, isu tiri pakati pevashoma vakatsigira MATE uye tiri kuvandudza muGnome 3 kufambisa iyi shanduko uye kuita kuti vanhu vanzwe vakasununguka mune ino desktop nyowani ...
… Shanduro dzekare dzeLinux Mint dzichiri kuwanikwa kune vashandisi vanosarudza Gnome 2…
… Gnome3 MGSE mukumisikidza kutsva kwechiratidzo chatinacho cheLinux Mint desktop…
Zvakanaka, unoziva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Bug inogadzirisa muLinux Mint 12
Uye nezve kushandiswa kusingaenzaniswi kweRam zviwanikwa ivo hapana chavanotaura? Imwe sarudzo ichave yekupa simba iyo CPU?, Nguva ichataura
Chokwadi vakomana vanobva kumindi vari kuita basa rakakura, asi ini handiite
Ini ndinonyatsoda zano rekuti rakavakirwa pahunhu uye ini handisi gnome mudiwa, asi hei rimwe zuva ndichaipa mukana.
Parizvino ini ndichapa Arch mukana wekundikurudzira zvakanyanya mazuva ese.
Ini handifarirewo zano racho, asi ndinofungidzira kuti nenguva (pamwe) izvo zvichachinja. Vazhinji uye vazhinji vashandisi vari kukumbira Linux Mint kuti iende kuLMDE sekuparadzira mureza.
Nei vasingavimbe neDebian CUT pachinzvimbo chekuyedza kuve chaiyo inotenderera muchina?
Kwazisai Adep uye gamuchirai:
Chaizvoizvo Debian CUT haichisiri Rolling kupfuura Kuedza .. Kana zvirinani hazvindipe iko kunzwa.
Iyo yakanaka mindi, yakapusa kupfuura ubuntu, yakanyanya kunaka uye kwekanguva yakagadzikana, iyo mint 12 rc yakaunza zvikanganiso zvakawanda uye ikapwanya goko kakawanda, zvakare kana ndikaisa vhidhiyo yeimba, nyaya yacho inowedzera, asi kwenguva iyo vanoenda nechinangwa chavo, zvese zvakanaka kwazvo kwavari,
Ndiri kushandisa RC uye handigone kufungidzira kuti chiitiko neGnome 3 chingaite nani.
Kugamuchirwa kuDeldelinux. Wane nguva yakareba sei uchiishandisa?
Zvakanaka ini ndinobva kumac world uye ini ndine mint12 ndakaisirwa, kwandiri yakakwana sezvo arch uye bsd inodhura kuisa, mashandiro andinayo pane yangu i5 2500k pc ine 8 gb yakakura mune zvese inoshandisa zviwanikwa asi zvakanyanya kupfuura ingwe yechando kana kuhwina 7, dambudziko mutyairi weNvidia uyo dzimwe nguva anoita chimwe chinhu chisinganzwisisike pachiratidziro pandinenge ndamboita zororo rese uye ndotanga mufananidzo wacho wakagwamba nechando, uye wacom inoita kukundikana pandinoshandisa gimp asi iko kuita kwese kwakakwana Ndanga ndichiri kuishandisa kwemazuva matatu iye uye kwechinguva chakanaka chakanaka.
Mukuru Jose, kunyangwe hazvo iine i5 uye 8Gb ye RAM. Chii chakaipa? LOL..
Hi Jose, unogamuchirwa kunzvimbo yedu 🙂
Mint yakavakirwa paUbuntu, iyo isiri iyo yakagadzika distro yezvose, pamwe dambudziko remutyairi rine chekuita neizvi.
Edza nayo neLMDE (Linux Mint Debian Edition), kana uine kusahadzika takaisa LMDE yekuisa tutorials pano, saka kana uchida iwe unogona kutarisa.
Kwaziso uye kugamuchirwa 🙂
Mhoro <° Linux:
Ndakauya kuLinux kubva kuWinVista uye nerombo rakanaka shamwari yakamisikidza kuyedza LM9 (Linux Mint 9 "Isadora"). Ndinoreurura kuti kumisikidzwa kwanga kusiri nyore kune Bachelor of Arts, chinhu chakanaka ndechekuti basa rangu nderekuverenga uye, zvakanaka, ndakapedza nguva yakawanda ndichiverenga zvidzidzo nevamwe online; asi pandakaiisa ndakashamisika chose. Iyo green yeLM9 yakandipwanya uye ini ndichiri.
Nehurombo laptop yangu yakafa uye ndakave nemukana wekutenga imwe laptop [Dell Inspiron 15R (N5110) ine 6GB Ram, 640 DD, i7 processor uye Nvidia GeoForce GT 525M 1G kadhi] mwedzi yakati wandei yapfuura (pakati paAugust) uye nekukurumidza apo yakasvika ini ndaida kuisa yangu yakanaka LM9, asi haina kuziva zvinhu zvakawanda uye ndakafunga kuti raive dambudziko nevatyairi nevamwe. Saka ndakaedza LM11 nekernel nyowani uye dambudziko rebhatiri rakandityisa; Kunze kwezvo, Compiz yakanga isingaenderane neLM11 - panguva iyoyo ndaifunga kuti yaive nekuda kwekadhi kadhi kadhi Ndakaedza Fedora 15, OpenSuse (vhezheni neGnome3), LMDE 201109 muLIVECD modhi uye vese vaive nedambudziko rakafanana rekernel. Uye zvakare, ndakaona kupisa kweLap kwandisina muWin7.
MuWin7 ndakaona kuti macores mana e4 eprosesa yangu akamiswa uye pandakaedza LMDE8 zvikamu zvisere zvinoramba zvichishanda nguva dzese. Kana ndikavaisa mu "Ondemand" maitiro pane dzimwe nguva vaigona kupisa kumusoro uye zvaive zvisina basa kana ndikavaisa mune yakachengetwa modhi nekuti processor yese yakashanda padiki, asi hapana musimboti wakambomira.
Ndinoziva pane mhinduro inogona nekuwedzera mutsara "pcie_aspm = simba" mu grub, asi handizive kana ichishanda zvakanaka. Ini ndanga ndichida kuisa iyo LMDE201109 asi ndisingazive kuti mhinduro iyoyo inoshanda, ini handidi kuisa panjodzi muchina wangu. Ndicho chikonzero nei ndichida kukubvunza iwe iyi mibvunzo mitatu:
1. Iwe unofunga kuti matambudziko aya (bhatiri uye kupisa kupisa) anogona kugadziriswa neLM12?
2. Zvinoita here kugadzirisa dambudziko neiyo LMDE2011 uye sei?
3. Ini zviri nani kumirira kuti LMDE ibude mushure mekutanga kweLM12, pasi pekufungidzira kuti izvi zvikanganiso hazvisisipo?
Ndinokutendai pamberi pekunge mandiverengera uye nekusagadzikana kunogona kukukonzerai.
Uye kana ini ndatova ne linux mint 12 asi haisi kumhanya mushe uye ini ndoda kuve neyekupedzisira vhezheni isina zvikanganiso uye kuti inomhanya mushe, unogona kundiudza kuti sei kubva kuchiteshi nekuti ini ndirikutotsvaga zvinongedzo uye hapana chinhu zvinoshanda, kana Kana iwe uchikwanisa kundipa iyo link kwazvinobva, ndapota, ndatenda.